Annaga nagu saabsan - Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd.
Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2007 waxayna ku taal Yiwu, Shiinaha, oo ah caasimadda badeecadaha yaryar ee adduunka. Waa soo-saare xirfad leh oo soo saara alaabada ciddiyaha sida Gel polish, nalalka ciddiyaha uv led, laydhka ciddiyaha elektarooniga ah, nadiifiyaha heerkulka sare iyo armaajooyinka uv sterilizer, Qalabka qurxinta, aaladaha manicure, iwm. . Hadda waxaan haynaa saddex summadood "Faceshowes iyo EG" Waxaan ka gudubnay CE, ROHS, BV, MSDS, SGS.
Hal-ku-dhegga ah “abuur, guul-guul, iyo wadaag”, falsafada shirkadeena waa “ Kalsoonida, Hufan, Adeeg daacad ah, Midnimo Dhisidda, Ku Dadaalka Faa’iidooyinka”. Waxaa naga go'an inaan samayno "FACESHOWES" inuu noqdo sumadda Shiinaha Top 3. Calaamadda ciddiyaha caanka ah ee adduunka!
Warshada ku nool 10,000 mitir oo laba jibbaaran, shaqeeya ku dhawaad ​​200 qof, R & D iyo kooxda design ee 10 qof, iibka sanadlaha ah 120 million yuan at 2018. Our gool waa in labanlaaban kor loo qaado sanadaha soo socda.
Shirkadeena waxay leedahay qalab wax soo saar horumarsan, nidaam tayo fiican leh iyo nidaam saadka oo hufan. Waxaan bixinaa adeegyada OEM/ODM. Waxaan la aas aasnay ​​iskaashi muddo dheer oo xasilloon oo lala yeesho Shiinaha dukaamada ciddiyaha iyo shirkadaha ganacsiga ee ugu waaweyn. Waxaan u dhoofinay in ka badan 100 countreis sida Europe, America, South America, Russia, Yukreeniyaan Japan iyo South Korea, iwm. Iyada oo leh tayo la isku halayn karo, qiimo tartan iyo adeegyo xirfad leh, waxaan ku raaxaysanay sumcad sare oo ka timid cleints adduunka oo dhan. Sannad kasta, waxaan tagnaa 2 ama 3 bandhigyo shisheeye oo kala duwan sida HK fair, carwada cosmoprof, carwada quruxda Ruushka.
Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd. ku soo dhawaada saaxiibada ka kala yimid aduunka dacaladeeda.
Waxaan leenahay warshad wax soo saar xirfad leh iyo kooxda naqshadeynta. Waxaan u qaadanaa waayo-aragnimada isticmaale iyo hal-abuurnimada sida fikradda alaabta. Laga bilaabo naqshadda bilowga ah ee alaabta, waxaan si joogto ah u hagaajineynaa, ka dibna geli wax soo saarka ka dib wax soo saarka tijaabada.
Mararka qaarkood waxay ku saleysan tahay xogta aasaasiga ah, waxaana lagu dabaqaa marar badan. Waayo-aragnimada, hagaajinta naqshadeynta alaabta, alaabta cusub ayaa lagu dhammeeyaa fikrad gaar ah iyada oo aan laga tegin sharciyada iyo mabaadi'da waxyaabaha. Waa si sax ah sababtoo ah horumarinta heerarka warshadaha iyo takhasuska shirkadaha sida Rongfeng in warshadaha ciddiyaha ay horumarin karaan iyo horu-socod boodbood iyo xuduud.
Wakhtyada wakhtiyada, Rongfeng waxay sii wadi doontaa la qabsiga suuqa, dardargelinta cusboonaysiinta alaabta, cusboonaysiinta tignoolajiyada adeegga, kordhinta tababarka, oo ay la shaqeyso asxaab badan oo warshado ah, iskuulo, iyo ururo si loo abuuro mustaqbal ifaya warshadaha ciddiyaha.Rongfeng, oo si xawli ah u horumaraya, ayaa bakhaaro iskaashatooyin ku leh gobolo badan, degmooyin, iyo ismaamul gobolo badan oo dalka ah, ilaa gobolada dibedaha, waxaanay ku leeyihiin in ka badan boqol bakhaar oo iskaashatooyin ah oo dalka oo dhan ku yaala welina sii koraya.
Dhammaan alaabooyinka Rongfeng si madax-bannaan ayaa loo baaray oo ay horumariyeen astaanta. Caafimaadka, badbaadada, ilaalinta deegaanka iyo adkeysiga waa raadinta quruxda Rongfeng.